Sidee technology blockchain horumarinta ee 2018? - Blockchain News
Sidee technology blockchain horumarinta ee 2018?
Ku dhawaad ​​toban sano ka hor dadka ugu horeysay laga helay wax ku saabsan technology blockchain. Tan iyo markaas, wakiilada warshado kala duwan ayaa la socodka horumarinta technology this si aad u hesho isticmaalka a waxaa loogu talagalay in beerahooda. Waxaa intaa dheer, Shirkadaha ugu aasaasay waxaa biirtay galay gaashaanbuur sida Enterprise Ethereum Alliance (EEE), R3, iyo Project Hyperledger, in la abuuro xal cusub blockchain ku salaysan. Waxaan rabnaa in aan la wadaagno fikradaha khubarada ku saabsan horumarinta blockchain in 2018, iyo shirkadaha ayaa qorsheyneysa in ay hirgeliyaan technology cusub ee mustaqbalka dhow.
Blockchain Technology Samayso
Sida Forbes dhigayaa blockchain yeelan doontaa saamaynta kala duwan sida loo shaqeeyayaasha qiimeeyo murashaxiinta iyo buuxi shaqooyinka. In 2018, waxaa jiri doona dhufto badan oo suuqa la mid ah Suuqa Abbiyus, kaas oo bixiya users leh “smart” profiles on shabakadda blockchain. Ma aha oo kaliya profiles kuwaas oo ku jiri doona taariikh nololeedka users, laakiin sidoo kale macluumaad ku saabsan mudnaanta xirfadiisa iyo guulihii, shahaadooyinka ee ku tartamaya barnaamijyo waxbarasho iyo macluumaad kasta oo kale oo muhiim ah. Ka sokow, hay'adaha waxbarashada iyo loo shaqeeyayaashuba waxay marin u heli doonaan profiles si loo xaqiijiyo macluumaadkan, oon taas oo si buuxda la isku halayn karo.
Warbixinta ayaa dhawaan ka Fahanka Caafimaadka IDC - cilmi-baaris ah oo adag tashan - Hagidda in sanadaha soo socda technology blockchain waxaa loo isticmaali doonaa in meelo badan oo ka mid ah daryeelka caafimaadka. daraasadda “saadaasha World of warshadaha caafimaadka ee 2018” saadaaliyay in ay sanadka soo socda 20% ururada si firfircoon uga soo koraya doonaa blockchain mashaariic. by 2020 blockchain waxaa loo isticmaali doonaa in maamulka hawl-, iyo sidoo kale ilaalinta xogta bukaanka. Shirkadda Skycell waa tusaale cad u ah sida blockchain iyo IoT bandhigto sahaydu ku ool ah in ay shirkadaha dawooyinka, taas oo ka mid ah lacagaha, biilasha, iyo caymiska.
At ka qaybgalayaasha isla mashruuca Machadka Cilmi-baarista ee Blockchain, oo ay ku jiraan IBM, Pepsi Co., iyo FedEx, fisho blockchain in hirgeliyo wax soo saarka iyo wax soo saarka warshadaha, ma noqon doonaa oo kaliya qalab maamulaha, laakiin gudashada doonaa jiilka labaad ee kacaanka dhijitaalka, iyadoo mid ka mid ah marka hore in ay la alifay ee Internetka. Shirkadaha sida Foxconn isticmaali doonaa blockchain si ay ula socdaan xawaalad sahaydu ay.
Agaasimaha Blockchain at LOOMIA Saa'uul Lederer ayaa aaminsan in 2018 waan arki doonaa shirkadaha sida la aasaasay, in mar hore u suurtagashay in ay isu caddeeyaan in suuqyada kala duwan, daahfuri doonaa adeegyada pilot iyo waxyaabaha ku salaysan blockchain dadweynaha.
shirkadaha aasaasay yihiin kuwo aad u ogyahay sida ay hay'adaha in tiray internetka ee 90s ee wada baabbe'een by GOORMUU web, oo iyagu ma doonayaan in la mid ah blindsided leh ay ka imanayaan technology blockchain. Waxay aqoonsan waxa uu sidoo kale bilaabi tijaabinayaan blockchain ama marayaa jidka dadka Lughaya.
Thanks to blockchain, isticmaalka heshiisyada smart aad u beddeli doonaa. Xagaagii lasoo dhaafay IT Rafaa IBM, Insurance Corporation American AIG, iyo shirkad dhaqaale Standard Chartered PLC dhameystirtay imtixaanka tijaabada ah ee blockchain ku salaysan “smart” caymiska ee caalamiga ah. Waayo, markii ugu horeysay blockchain iyo smart qandaraasyada loo isticmaalay in industry this, taas oo sii horumariyo doonaa mashruucan ku saabsan baaxadda weyn ee 2018. Oliver Bussmann hubin blockchain in la beddelo ma aha oo kaliya oo ka mid ah qaybaha dhaqaale iyo caymiska, laakiin sidoo kale saameyn ku yeelan doono warshado kale. Arrintan la xiriira, sannadka soo socda shirkado badan yeelan doonaan in ay la qabsadaan daydo ganacsi si ay u buuxiyaan shuruudaha ka mid ah suuqyada cusub.
In dunida ah, halkaas oo ay noqonayaan dillaaleyda huriye, Shirkadaha waxay yeelan doonaan si ay u bartaan si ay u joojiyaan fekerayo in Fididda oo mar dambena u furan-hawlgalayaasha noqoto in la lafaguro ama dhufto ee ballaadhan. Taasi, markeeda, waxaa loola jeedaa go'aan noocyada lagu daydo ganacsiga ay rabaan - haddii ay tahay riwaayadaha madal, Riwaayado wax soo saarka, xeelado mayrofoon-channel, iyo wixii la mid ah.
Oliver Bussmann - Madaxweynaha Crypto Valley Association iyo sanduuqa ATP hore ee UBS aan-faa'iido-doon - xusay in bangiyada waaweyn noqon doonaa xiiso hababka lacag bixinta blockchain, maxaa yeelay, way jirrabeen by faa'idooyinka blockchain keentaa marka la eego processing-waqtiga dhabta ah, profiles halista hoose, kharashka hoose iyo hufnaan. Ganacsade ayaa sidoo kale sheegay in in 2017, Shirkadaha uu lahaa awood ay ku la siiyo noocyada cusub ee adeegyada blockchain awood u fiiro gaar ah iyo in ka badan ka shaqeeyaan, gaar ahaan haddii blockchain weheliso IoT iyo AI. Sida laga soo xigtay Bussman, habkani ku sii doonaa 2018, sida warbixinta dhawaan ka dhacay Forbes sheegayaa sidoo kale. nooca lo iyo baahsan ee blockchain waa mid aad u faa'iido badan ee la socodka tirada mar walba sii koraya ee qalabka on IoT. Sayidka, warbixinta Hagidda in xoog loo isticmaalo kombiyuutarka bitcoins macdanta loo isticmaali karo in ka cyber-waxdhacayaal jiilka cusub ilaaliyaan guryahooda smart.
CEO ee Bu'da Vision, Abhishek Pitti qeexayaa sifooyinka blockchain kuwaas oo kaa caawin doonaa in horumarinta ilaalinta xogta ka xoog. Wuxu qabaa, in in 2018, goobtan arki doonaa faa'iidada ugu weyn ka horumarinta is tiknolojiyada sida cryptography, encryption, iyo blockchain:
Blockchain waa aalad awood taasoo keeni karto isbedel wanaagsan ee warshadaha badan, iyo anagoo saadaal wanaagsan in horumarka ee technology encryption iyo cryptography, weheliyaan blockchain, noqon doonaa karinayo for guul in industry ammaanka ee 2018. Tusaale ahaan, hack xogta Equifax waa wax loo baahan yahay in ka badan oo kaliya blockchain inuu u reebay. Iyadoo technology blockchain leedahay macaamiisha caawisay caddayn kari waayeen awood badan ku xogta shakhsiga iyaga u gaar ah oo ay leedahay shirkadda, dhaqanka ammaanka xun ayaa ka tagay lahaa nugul, leh ama aan lahayn blockchain. Halkee muuqaalada ammaanka blockchain ay dhab ahaan iman doonaa iyaga u gaar noqon doonaa in ay u xigay intii la IoT. Iyada oo tiro sii kordhaysa oo ah qalabka ku xiran, 2018 u baahan doontaa qaabka ammaanka blockchain ayaa si ay u ilaaliyaan codsiyada IoT iyo users ka jajaban xogta casri ah. Waxaan si xoogan u aaminsan yihiin in 2017 ay ahayd oo keliya trailer ah waxa ay u yimaadaan 2018 guud ahaan hannaanka blockchain oo dhan iyo waaxda.
dmitriy Zhulin, co-aasaasaha INS deegaanka, filaysaa in ay arkaan blockchain noqon technology ah loo ansixiyay caadiga ah ee 2018, bedel ciidan dhan warshadaha adeegyada maaliyadeed iyo tafaariiqda, si logistics iyo daawo. Isla mar ahaantaana Max Kordek, co-aasaasaha shirkadda Lisk, ayaa aaminsan in aan ka filan karaa horumar badan oo maamul network blockchain ee 2018, taas oo ka mid noqon doona habab loo dhanyahay cusub iyo mabaadii'da updated samaynta go'aanada ku saabsan casriyaynta network:
Iyadoo User kacsan Seeraar ayaa jilicsan fargeeto (UASF), ama hababka loo dhanyahay Lisk ee igmado-Caddaynta-of-saamiga, aynu ka filan karto xal mustaqbalka caawinaya in go'aamo muhiim ah oo ku saabsan mustaqbalka mashruuc ee. Arrinta of scalability wuxuu noqon doonaa mawduuca kale kulul sii galay 2018. Qaababka blockchain hadda ayaa weli ka danbeeya danbayso marka loo eego xawaaraha macaamil ganacsi ee ay bixiyaan tartanka dhaqanka sida VISA ama Mastercard. warshadaha wuxuu u baahan yahay in la helo xal cusub oo ay tayadoodii code heer ay heer tartan rasmi ah ee waxqabadka lagu gaari karaa. Tani waa mid ka mid ah sababaha Lisk waa sidechains fulinta. Hubinta hawl network si fiican u qaybiyey iyo hagaajinta xawaaraha processing on network waa lagama maarmaan.
Blockchain Technology Samayso 2018
Si joogto ah Financial Ex ...
Cryptocurrency ee cusub ...
Post Previous:horumarinta suuqa Cryptocurrency in 2018
Post Next:The dhacdooyinka ugu muhiimsan ee 2017 ee Community Crypto ah